Home News Maamule iskuul oo lagu dilay xalay Magaalada Muqdisho
Maamule iskuul oo lagu dilay xalay Magaalada Muqdisho
Koox hubeysan ayaa xalay macalin iskuul waxaa ay ku dileen Xaafada Coca Cola ee degmada Yaaqshiid ee Gobalka Banaadir.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu Magacaabi jiray Xuseen Maxamed Xuseen.
Dadka Deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay Marxuunka uu ahaa Macalin iskuul oo ku yaala Degmada Yaaqshiid.
Kooxda Dilka fulisay ayaa waxaa la sheegay in ay goobta ka baxsadeen.
Ilaa iyo hada lama oga Sababta loo dilay Marxuumka.
Mana jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay Booliska Soomaaliya.
Muqdisho ayaa marar qaar waxaa ay marti gelisay dilal iyo qaraxyo oo masuuliyadiisa ay sheegtaan dagaalamaayasha Al-Shabaab.
Previous articleMaxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xukun ku riday xubin katirsaneed Ururka Al Shabaab
Next articledagaal xoogan oo ka soconaya deegaano hoostaga Gobolka Hiiraan